Xisbiga WADANI oo ka baxay heshiiskii Xisbiyada Soomaaliland | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xisbiga WADANI oo ka baxay heshiiskii Xisbiyada Soomaaliland
Xisbiga Mucaaradka ee WADANI ee Soomaaliland ayaa Maanta oo Axad ah waxaa uu ku dhawaaqay in uu ka baxay heshiiskii ay la galeen Xisbiyada KULMIYE iyo UCID oo la xiriira dhinaca doorashooyinka oo khilaaf xoogan uu ka taagnaa mudo dhowr bilood ah.
Hogaamiyaha Xisbiga Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo Maanta Warbaahinta kula hadlay Magalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in sababta ay heshiiska uga baxeen ay tahay in qodobadii qaar lagu heshiiyay qaarkood uu jebiyay Xisbiga Kulmiye oo hadda ah kana haya talada Soomaaliland.
Waxaa uu sidoo kale hadalkiisa intaasi ku daray in sababta ay tallaabadan u qaadeen ay timid,kadib hadal shalay kasoo yeeray la-taliyaha dhinaca Sharciga ee Golaha Wakiilada,waxaana uu sheegay in hehsiiskaas uu qorsuhu ahaa in la horgeeyo golaha Wakiilada si ay u ansixiyaan ama u diidaan.
Ugu dambeyn Hogaamiyaha Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaa uu sheegay in hadalka kazoo yeeray la-taliyaha dhinaca Sharciga ee Golaha Wakiilada Soomaaliland ay mas’uul ka yihiin xisbiga talada haya ee Kulmiye.
Si kastaba shalay ayaa heshiiskaas ay horay u wada gaareen sadexda Xisbi ee Soomaaliland oo kala ah WADANI,KULMIYE iyo UCID la horgeeyay Baarlamaanka Soomaaliland,hayeeshee dood dheer kadib ay goluhu laaleenqodob ka mid ah heshiiska Saddexda Xisbi.
Previous articleFaa Faahin Al-shabaab oo Gacanta looga dhigay Degaano Cusub
Next articlePuntland police harass and briefly detain two TV journalists in Galkayo